ATỌRỌKWALA ỤKỌCHUKWU NDI ỤKA KATỌLIK ỌZỌ – hoo!haa!!
ATỌRỌKWALA ỤKỌCHUKWU NDI ỤKA KATỌLIK ỌZỌ
Onye isi nchụ aja ụlọ ụka ndi Katọlik n’Obajana nke steeti Kogi bụ Rev. Fr. Leo Michael, ka anyị na-anụ na ndi ntọ tọọrọ n’ụbọchị Tuusdee gara aga.
Ọbụ n’obodo ana-akpọ Irepeni, nke dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Adevi na steeti Kogi ka anọ tọrọ ụkọchukwu a.
N’otu aka ahụ, ekwukwara na otu ndi ahụ tọkwara onye ọrụ pastọ ndi ụka Redeem Christian Church of God, n’otu ebe ahụ nakwa n’otu oge ahụ. Ka ihe si gbata kwụrụ kịta, amabeghị aha onye pastọ ahụ. Ekwuru na nwoke pastọ a na-eje Okene.
Obeghị n’ebe a, ekwukwara na ndi ntọ a nọkwa n’otu okporo ụzọ ahụ tọrọ otu onye nkuzi dị elu nke ụlọ akwụkwụ ukwu ndi nkuzi steeti Kogi, dị na Kabba. Aha nwoke a bụ Mazị Aronimu Samuel Babatunde, ọ na-akụzi ihe ọmụmụ ọgbara-igbo-gharịị bụ Kemisrị.
Dika onye ode akwụkwọ ukwu Dayọsis nke Lokoja bụ Pita Adịnoyi sịrị kwue, ndi ntọ a sịrị n’ime ọhịa mapụta n’ike n’ebe dịdebere ebe ndi nchekwa na-akpụchi ụzọ, dịdebere obodo ana-akpọ Irepeni, ma dọkpụrụ ụkọchukwu na onye ọzọ ekwenyere na ọ bụ pastọ, baa ime ọhịa ebe ha hapụrụ ụgbọala nabọ mmadụ abụọ ndi a n’ụzọ kpụrụ ha gawa.
Onye ode akwụkwọ ukwu a kwuru na ndi ntọ a ewetuela aka n’ego ha kwuburu ka akwụọ ha, bụ nde naira iri ise, bịazịa na nde naira asatọ. O kwuru na ndi ntọ a sịrị na ọ bụrụ na emeghị ka ha kwuru tupu elekere mbụ nke ehihie ụbọchị Tọzdee, ha emee nke ka njọ. O kwukwara na ndi agha nakwa ndi nchekwa obodo akpọrọ ‘DSS’ abanyela ọrụ nke gbanu gbanu ịma ma aga anwụchị ndi ntọ a. O gosịrị nwute ya ka esi atọzị ụmụ ogbenye aghara aghara ma kwue na atụrụ anya na ọnọdụ nchekwa n’ala anyị aka adịgo mma karịa ka ọdị ugbu a. Ọ gara n’ihu kpọkue gọọmenti ka o leba anya n’ọnọdụ a.
Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ndi uwe ojii nke steeti Kogi bụ Wiliam Aya kwuru n’ọbụ eziokwu na-atọọrọ ụkọchukwu ndi ụka Katọlik mana ya anụbeghị maka ọtụtọ nke mmadụ bụọ ndi ọzọ.
Previous Post: Ilu maka Ehi
Next Post: EGWU DỊKWA NA STEETI IMO!
Chineke biko mekwaara ụmụ ya ebere.